Fikarohana momba ny firaisana Ireo Kintan'ny Fikambanana Ifanampiana - Ny fikarohana momba ny vatana
Ny kintana fikarohana momba ny vatana
Ny fifantohana amin'ny ReincarnationResearch.com dia fikarohana izay manome porofo na porofo momba ny vatana vaovao sy ny fiainana taloha.
Ny tsirairay izay manome vola amin'ny ReincarnationResearch.com dia ny kintana. Ny fanampiana omenao dia hampiasaina handikana fanadihadiana manan-danja tsy miankina amin'ny fambolena voajanahary, anisan'izany ny maro nalain'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, amin'ny fiteny maro.
Ny famoahana ireo tranga ireo amin'ny fanambadiana vovoka dia hanampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa amin'ny fampisehoana izany Mety hiova ny fivavahana, ny zom-pirenena sy ny foko hatramin 'ny androm-piainanao.
Ny protocole ho an'ny fandikan-teny dia voafaritra amin'ny antsika Mission Statement.
Ankoatra izany, ny vola dia hampiasaina amin'ny fampivelarana ny tranonkalantsika ary hamorona fiarahamonina iraisampirenena izay manohana ny fikarohana momba ny fiorenam-ponenana vaovao sy ny fiovana ara-tsosialy azo tsapain-tanana izay mety hitranga amin'ny porofo momba ny vatana vaovao indray.
Ny sary nomena ny marina dia avy amin'ny fihaonamben'ny Reincarnation natao tao Marina del Rey, Californie tamin'ny Oktobra 2008.